Mpanakanto sy Propagandy : Tsara ny tsena -
AccueilVaovao SamihafaMpanakanto sy Propagandy : Tsara ny tsena
Mpanakanto sy Propagandy : Tsara ny tsena
31/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Na dia atao faralahin’olona eo amin’ny fitantanan-draharaham-pirenena aza ny kolontsaina, dia manana ny anjara birikiny amin’ny fametrahana ny mpitondra iray eo amin’ny toerany ny mpanakanto, indrindra ny sehatry ny mozika. Manana anjara toerana lehibe amin’ny famoriana vahoaka ny mpanakanto, ary saika nifandrombahana ny naka ireo mpanakanto sangany sy manana ny lazany amin’izao fotoana. Saika ireo mpanakanto eo amin’ny sehatry ny mozika mafana no mahazo tsena ao anatin’ny fampielezan-kevitra. Mizara roa mazava anefa ny toeran’ny mpanakanto ao anatin’ny fampielezan-kevitra, ao ireo tena mpanohana tsy misy fepetra, ary iray petsapetsa amin’ny kandidà iray, ao ihany koa ireo mandray izany ho toa ny asa rehetra. Amin’ny ankapobeny dia ireo mpanakanto mpitarika no tena mifamatotra amin’ny kandidà.
Anisan’izany i Rossy sy Jerry Marcoss miaraka amin’i Andry Rajoelina, Bodo sy Chantal miaraka amin’ny kandidà Marc Ravalomanana, Lego miaraka amin’ny Kandidà, Ny Rado Rafalimanana, Bolo Pix sy Mija miaraka amin’ny kandidà Hery Rajaonarimampianina… « Na dia fampisehoana maimaimpoana aza dia fotoana iray hiasana ny fampielezan-kevitra toa izao ho anay mpanakanto. Asa toa ny asa rehetra no atao fa any anaty vata no hanehoana ny safidy », araka ny fanamarihan’ny mpanakanto iray. « Tsy dia manana anjara loatra amin’ny fampielezan-kevitra ny gadon-kira entinay. Asa amin’ny ankapobeny no atao rehefa misy miantso », hoy indray ny mpanakanto mpiangaly ny gadona Rock.
Na izany aza, anisan’ny zava-baovao tamin’ity fampielezan-kevitra 2018 ity ny fisian’ny fifanarahana teo amin’ny kandidà vitsivitsy, izay voasokajy ao anatin’ireo manam-bola, sahy namatotra sy nanao fifanarahana tamin’ny mpanakanto maromaro nandritra ny 30 andron’ny fampielezan-kevitra. « Tsara ny tsena tamin’ny ankapobeny, satria dia fampisehoana maromaro no natao ary mifanaraka amin’izay ny karama raisina », hoy indray ny mpanakanto hafa raha nanontaniana ny karama raisin’izy ireo nandritra ny fampielezan-kevitra. « Tsy afaka hanome tarehimarika aho fa tsara kokoa noho ny andavanandro ary vola mitambatra », hoy ihany izy.
Ankoatra ny fampisehoana, dia vola manokana azon’ny mpanakanto nandritra ity fifidianana ho filoham-pirenena 2018 ity ihany koa ny tontolon’ny famoronana. « Misy amin’ireo mpamorona no efa nametraka ny sangan’asany aty aminay, ary misy vola raisiny amin’ny maha-mpamorona azy araka ny fampiasana ny sangan’asa », araka ny fanazavan’ny talen’ny ofisy malagasy miaro ny zon’ny mpamorona (Omda) Haja Ranjarivo. Efa nisy rahateo ny fampihaonana nataon’ny Omda ny solontenan’ireo kandidà, amin’ny fampahafantarana azy ireo ny fampiasana ny sangan’asan’ny mpanakanto. «Miankina amin’ny fampiasan’ny kandidà tsirairay ny famoronana ataony ny vola alaina aminy. Noho ny hetsika tsy misy vidim-pidirana dia efa nisy ny sarany napetraka, araka ny toerana ampiasain’ny kandidà », hoy hatrany izy. Hatreto dia samy mbola mihazohazo amin’ny fandoavana ny saran’ny fampiasana ny famoronana ireo kandidà samihafa.